Umhlahlandlela wakho omusha onobungane emhlabeni wengxoxo ye-cam namantombazane avela emhlabeni wonke! Xoxa ngevidiyo namantombazane. Khuluma nabantu ongabazi futhi udlale ngothando nabesifazane ezingosini zezingxoxo ezibukhoma ku-inthanethi, ngokungaziwa nangaphandle kokubhalisa. Iwebhu, i-iPhone, uhlelo lokusebenza lwe-Android
Igumbi lokuxoxa le-Webcam
Ama-cam wamahhala akhombisa
Isayithi lethu le-cam yipulatifomu engcono kakhulu yokuthi ungahamba bukhoma imibukiso yekham yamahhala futhi wabelane ngamavidiyo nezithombe nabantu! Sebenzisa ikhompyutha noma i-smartphone yakho - ipulatifomu iyaguqulwa kuwo wonke amadivayisi wanamuhla.
Awudingi ukubhalisela igumbi lokuxoxa le-webcam, ungabuka izithombe namavidiyo mahhala ngaphandle kokubhalisa. Shintsha phakathi kokusakazwa ngemizuzwana bese ubuka okuqukethwe okuvumelana nezintshisekelo zakho.
Yenza imali ngokusakaza bukhoma nangokubeka okuqukethwe kungxoxo ye-cam. Zuze ukunakwa kwababhalisile abasha bese uthola imali eyengeziwe ngayo.
Ingxoxo yamahhala ye-cam
Konke okukuplatifomu yethu kwenzelwa lula abasebenzisi. Hlanganyela nokuqukethwe okuthakazelisayo ngendlela ofuna ngayo. Bhalisela ababhali obathandayo bese uthola izaziso ezisheshayo mayelana nokuqala kokusakazwa okusha nokushicilelwa kwezithombe namavidiyo amasha. Ufuna okuningi? Vula okubhaliselwe kwe-VIP futhi ubuke noma yikuphi ukusakazwa ngaphandle komkhawulo wesikhathi.
Ingxoxo yamahhala ye-webcam
Joyina ingxoxo yamahhala ye-webcam bese uthola ithuba lokuba yingxenye yemifudlana eminingi yezingxoxo zevidiyo. Uzothola ukuhlangana namantombazane ashisayo engxoxweni ngayinye ebukhoma. Xoxa namantombazane owathandayo, wenze izipho futhi ubonise izimpawu zokunakwa. Ngokwengeziwe, uma unentshisekelo ungaqala eyakho!
Ngamantombazane avela emazweni angaphezu kuka-170 ku-camchat, ungakhuluma nanoma ngubani omfunayo! Ungaxhuma kalula nanoma imuphi umuntu wesifazane kumibukiso yama-cam yamahhala mahhala noma ngabe ukuyiphi ingxenye yomhlaba. Futhi ungabhalisa ngokuchofoza okukodwa bese uthola izaziso ezisheshayo mayelana nemifudlana emisha nokuqukethwe okusha.
Gxila kokuqukethwe okuthandayo kuphela. Shintsha phakathi kwezigaba ezithandwayo futhi ungachithi isikhathi kulokho ongakuthandi. Ufuna noma yini ongabelana ngayo nezithameli? Yenza okuthunyelwe okusheshayo futhi ubuke ukuthi inani lababhalisile likhula kanjani.